Baadhitaanka Mısra Öz Sel, oo wiilkeeda ku weyday shilka tareenka Çorlu: Xafiiska xeer ilaaliyaha, oo shaqadiisa aan qaban 540 maalmood, ayaa baaritaan ii fura. Ha na dhaawicin mar dambe, kani waa kii labaad ee Kirismaskeyga oo aan cunugeyga jirin. Disaster orlu musiiba [More ...]
Mashruuca Samsun wuxuu sii wadaa inuu si habsami leh oo habsami leh taraafikada taraafikada mashruuca Samsun u wado İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş (SAMULAŞ) sanadka 2019 ilaa 30 milyan 220 kun 954 rakaab ah [More ...]
Isugeyn 100 kaaliye Maaliyadeed iyo shaqaale ku takhasusay arrimaha maaliyadeed oo ku yaal xarunta dhexe ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda ayaa lagu qabtaa Ankara iyo Istanbul aagagga soo socda iyo lambarrada iyagoo qaadanaya imtixaanka gelitaanka. [More ...]
Iyada oo la raacayo Qodobka 657/4 ee Golaha Sharciga Gobolka iyo shuruudaha Golaha Ballanqaadka iyo Xeerarka Xeerarka Gobolka, 2575 KPSS waxaa loo adeegsan doonaa si waafaqsan Qodobka 12 / A ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee no. [More ...]
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Gaziantep Tuncay Yildirim Gaziantep dhibaatooyin xagga gaadiidka cirka ah oo ka jira magaalo sida Gaziantep, ayaa sheegaysa in aysan ku habooneyn, ayaa ku casumay mas'uuliyiinta in ay qaadaan tillaabo lagu xalliyo. Madaxweyne Hillaac uu [More ...]
Hogaamiyaha suuqa Turkey ee baska Otokar, ma la gooyaa xawaaraha bixinta. gaadiidka dadweynaha Modern ee Europe iyo sidoo kale Turkiga Otokar marsiiyey, dhigay sanadka ugu dambeeya ESHOT bixinta. Kuwa ugu nolosha wanaagsan dunida [More ...]
Waqtiga Gawaarida Denizli Cable waxaa loo kordhiyay kuwa raba inay ku raaxeystaan ​​barafka
Afar xilli oo dabiici ah oo leh noocyo qurux badan oo qurux badan oo soo jiidasho leh booqdayaasheeda iyo goobta muuqaalka cad iyo sawirada boostada, Denizli Cable Car iyo Bagbasi Plateau ayaa u yimid warka la sii daayay. caloosha [More ...]
Maalinta Koowaad ee Sannadka Cusub ee Gaadiidka Magaalada Istanbul oo Bilaash ah
Gawaarida dadweynaha ee ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa bixin doonta adeegyo bilaash ah dhamaan ciidaha diinta iyo sanadka rasmiga ah ee sanadka 2020, maalmaha imtixaanka iyo furitaanka iskuulka. Gaadiidka magaalada Istanbul maalinta koowaad ee sanadka cusub [More ...]
13.000 Seeds Kulul Ciidda Dhirta DHL
DP oogeen sii wadaan in ay shaqada ka leexinayn ee eber qiiqa bartilmaameedka Group ee 2050, oogeen Express Turkey, mustaqbalka cagaar ee dhammaan macaamilka iyo shaqaalaha in ay gacan deegaanka 13.000 miraha geedka [More ...]